Konke odinga ukukwazi mayelana ne-GOES sezulu satellite | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Cishe uke wezwa ngamasathelayithi wokubuka isikhala kuthelevishini. Angamadivayisi anokuthuthuka okuphezulu kakhulu kwezobuchwepheshe futhi akwazi ukusinikeza imininingwane enhle mayelana nokuthi yini okukhona endaweni yonke nokuthi kwenzekani emhlabeni wethu. Kulokhu, sikhuluma ngesathelayithi IZIMBI. Le satellite isisiza ekubikezeleni isimo sezulu kakhulu. Futhi ukuthi ukubikezela isimo sezulu kuyinto eyinkimbinkimbi kakhulu. Akuyona neze into engafakwa ku-intuued noma ukuthi ngamanye ama-algorithms ayasebenza. Ngalesi sizathu, kuyaziwa ukuthi kaningi "umuntu wesimo sezulu uyahluleka."
Kule ndatshana, sizokukhombisa ukuthi kungani i-GOES iyisathelayithi enhle kunazo zonke ebekwe emzileni wazo zonke izikhathi.
1 Udinga ukubikezela isimo sezulu
2 Yini iGoES?
3 Ikhwalithi engcono namaphutha okubikezela ambalwa
4 Ukubukwa kwendawo
Udinga ukubikezela isimo sezulu
Ukubikezela isimo sezulu kuyinto esiyidingayo ukwenza imisebenzi yethu noma ukuhlela imicimbi ethile. Ngokuya ngesimo sezulu, eminye imicimbi yenziwa noma cha. Ngakho-ke, ukwazi isimo sezulu kubalulekile. Noma kunjalo, Akuwona umsebenzi olula. Kuyinkimbinkimbi kakhulu ngoba okuguquguqukayo komkhathi kungashintsha njalo ngendaba yamahora. Yize namuhla kuningi izinhlelo zokusebenza zemvula futhi singazi ukuthi kusasa lizokuna yini endaweni yethu, le mininingwane ingahluleka njalo.
Futhi kungenxa yokuthi isibikezelo sezulu kwesinye isikhathi sihluleka, kuyinto ejwayelekile ngokuphelele. Isikhathi saziwa ukuthi sithinteka ngokuhlukahluka okuningi futhi izakhi zezulu. Ukuze siqaphe okwenzekayo emkhathini wethu, sinenye inqwaba yeziphuphutheki zokubuka isimo sezulu. Lezi ziphuphutheki zinakekela amandla bazi izinhlelo zasemkhathini ezikhona ngaso sonke isikhathi futhi bakwazi ukubikezela ukuvela kwazo.
Isathelayithi i-GOES yethulwa ngenhloso yokubikezela isimo sezulu ngokunembe nangokunembile. Ayinikezi lokho kuphela, inikeza okuningi kakhulu.
I-GOES yisifinyezo se- Isiphuphutheki se-Geostationary Operational Environmental. Le satellite icabange inguquko phakathi kwazo zonke iziphuphutheki zalolu hlobo. Kuneziphuphutheki ze-polar orbit nezinye iziphuphutheki ze-geostationary orbit. Lezi zokugcina yizo ezokujikeleza kwazo kuqondana nejubane esinalo umjikelezo womhlaba. Lokhu kusho ukuthi ihlala isinikeza isithombe esifanayo somhlaba. Iyakwazi ukuqhubeka nokundiza phezu kwamaphoyinti athile akhethekile kwiplanethi yethu. Lokhu kwenziwa ngoba inhloso yayo enkulu ukuhlukahluka kwesimo sezulu ukuze bakwazi ukubikezela izinguquko ezizokwenziwa.
Imodeli ye-GOES-R okukhulunywa ngayo iyinguquko enkulu kakhulu kusukela lapho amathuluzi wokuvuselela namandla wokucubungula idatha. Iyakwazi ukucubungula imininingwane ngobuningi obukhulu nangejubane, ngaleyo ndlela isinikeze isevisi enekhwalithi eyengeziwe nokunemba. Lokhu kudingekile impela uma sifuna ukuthola ukunemba lapho silungiselela imibiko yokubikezela isimo sezulu ngaphandle kokuthola amaphutha amancane.
Futhi, inesisombululo sendawo esiphindwe kane kunokujwayelekile futhi simbozwa ngokuphindwe kahlanu ngokushesha. Imephu yesikhathi sangempela yamabhawodi wombani iyamangalisa. Lokhu kusiza ekwandeni kwesibikezelo sezivunguvungu futhi kuthuthukise nezikhathi lapho ungaxwayisa khona ngokwakhiwa kwesiphepho. Lokhu kuphelele kulabo abafunda izinkanyamba noma labo "abazingela iziphepho." Ngakolunye uhlangothi, kuyasiza nasekwenzeni ngcono ukubikezelwa kwesiphepho namandla aso, ukulawula okungcono kokukhanya kwe-X-ray okuvela elangeni, njll.
Ikhwalithi engcono namaphutha okubikezela ambalwa
Okuzuzwayo ngesethelayithi yeGoES ukuthi ube nekhwalithi engcono lapho uthola imininingwane yezulu kanye nemikhawulo ephansi yephutha. Umbuzo abantu abaningi abazibuze wona uma bewufaka ku-orbit uwukuthi ukube besinezibikezelo ezihluleka ngaphansi kwezedlule. Kuyakhathaza impela ukwazi ukuthi izokuna ngalolu suku, ukukhansela izinhlelo ngenxa yalo futhi ekugcineni kube usuku olubalele kangcono kunakuqala. Noma okuphambene nalokho, ukuthi siyokuphuza bese siwa ngokuzumayo izihlambi enamandla.
Izibikezelo zesimo sezulu zitholakala kumamodeli enza ukulingiswa kwalokho okuzokwenzeka. Ukwenza lokhu kulingisa kuyadingeka ukwazi amanani wezinto eziguquguqukayo zesimo sezulu ngaleso sikhathi kanye nokuthambekela abanakho ukuguqula la manani. Ngamanye amagama, uma amanani okushisa, ingcindezi yomoya nomoya kuqhubeka nokushintsha njengoba kwenzeka manje, singabikezela ukwakheka kwezimvula. Noma kunjalo, kungenzeka ukuthi lawa manani ashintshe ukuthambekela kwawo kokunye ukuguquguquka. Yilokhu okwenza iphutha lihlale likhona.
Ukuze lezi zinhlobo zigeleze kangcono futhi zinikeze idatha enembile, sidinga idatha ethe xaxa ukufaka kokuguqukayo. Uma kunembile le datha, ukuqagela okungcono okungakwenziwa yisathelayithi i-GOES. Ngezinsimbi enazo, i-satellite ingabona ngesikhathi sangempela, ngaphandle kokwehluleka nangokuqhubekayo, ubuso bomhlaba ngamaqembu we-16 we-spectral. Ngaphezu kwalokho, Kubandakanya iziteshi ezibonakalayo, ezine eduze kweziteshi ze-infrared nezinye iziteshi eziyi-4 ze-infrared. Lonke leli khono likunika indawo encane yephutha.
Ubuhle balesi sathelayithi yezinguquko ukuthi ayigcini ngokunaka uMhlaba nokubuka kwesimo sezulu. Ibuye ibe nemishini yokuxhumana nokuxhumana kwangaphandle. Inesibopho, ngokwesibonelo, sokwazi amaphethini ezindawo anjenge umoya welanga. Iphinde ihlaziye ukugxila kwemisebe engalimaza osomkhathi ukuthi asikho emhlabeni.
Ngaphezu kokuhlola izingozi ezingaba khona kosomkhathi, lolu lwazi lungasetshenziswa ukuxwayisa ngemicimbi engaba yingozi engaba khona. Ngakho-ke, omunye umonakalo ezokuxhumana ngocingo ungagwenywa. Ine-magnetometer ebhekele ukukala amandla kazibuthe namandla asetshenziswa yizinhlayiya ezikhokhiswa ngaphandle.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-satellite yeGoES, okungcono kakhulu okukhona kuze kube manje
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » IYA ngesathelayithi